I-Shoutcart: Indlela elula yokuthenga i-Koutouts kwi-Social Media Influencers | Martech Zone
I-Soutcart: Indlela elula yokuThenga ii-Koutouts ezivela kwi-Social Media Influencers
NgoLwesibini, nge-28 kaDisemba ngo-2021 NgoLwesibini, nge-28 kaDisemba ngo-2021 Douglas Karr
Iziteshi zeDijithali ziyaqhubeka zikhula ngesantya esikhawulezayo, umngeni kubathengisi kuyo yonke indawo njengoko bethatha isigqibo malunga nokuba bakhuthaze ntoni kwaye bakhuthaze phi iimveliso kunye neenkonzo zabo kwi-Intanethi. Njengoko ujonge ukufikelela kubaphulaphuli abatsha, kukho amajelo edijithali afana noshicilelo lweshishini kunye neziphumo zokukhangela… kodwa zikwakhona abachaphazelayo.
Intengiso ye-influencer iyaqhubeka nokukhula ekuthandeni ngenxa yokuba abaphembeleli bakhule ngononophelo kwaye bagcina abaphulaphuli babo kunye nabalandeli ngokuhamba kwexesha. Abaphulaphuli babo bakhule bebathemba kunye neemveliso abazizisa etafileni. Akunjalo ngaphandle kwe-negatives yayo, nangona kunjalo.
abaninzi abachaphazelayo ngabantu nje abanabalandeli abaninzi… kodwa abasoloko benegunya kumanani abo. Bendizibeke kulo kholamu. Ngelixa ndinabalandeli abaninzi, abalandeli bam bayaqonda ukuba ndibonisa amaqonga kubo ukuze benze uphando olongezelelweyo kwaye babone ukuba kufanelekile. Ngenxa yoko, ndinokufumana ukucofa okuninzi kumxhasi okanye ikhonkco elidibeneyo… kodwa akunyanzelekanga ukuba kuthengwe. Ndilungile kuloo nto, kwaye ndihlala ndiphambi kwabathengisi abaza kum ukuze bafumane amaphulo okuthengisa.
Kukho ezininzi ukuthengisa okunempembelelo amaqonga phaya, uninzi lwazo luntsonkothile ngezicelo zephulo, ubungqina bohlalutyo, ikhonkco lokulandela umkhondo, njl.njl. Njengempembelelo, ndihlala nditsiba ezi zicelo kuba ixesha elithathayo ukufaka isicelo kunye nokusebenza kunye nenkampani ayifanelanga ingeniso abayifumanayo. banikezela ngephulo eliyimpumelelo. Shoutcart yahlukile… fumana nje abaphembeleli, hlawulela ukukhwaza kwakho, kwaye ujonge iziphumo. I-Shoutcart inikezela ngezi mpawu zilandelayo kunye nezibonelelo:
AmaPhulo anokuBuyiswa -I-Shoutcart ibonelela ngokukwazi uku-odola ukukhwaza kubaphembeleli abaninzi ngaxeshanye. Thenga i-shououts ephantsi njengeedola ezimbalwa, kwaye phezulu kwe-10k yeedola ngexesha.
Iidemografi zabalandeli -Hlunga abalandeli ngolwimi, ilizwe, ubudala, isini kunye nesini ekuvumela ukuba ukhethe iimpembelelo ezinokulandela ezihambelana nabaphulaphuli bakho.
Ukulandelela kunye neeMetrics -Ukulandela umkhondo kunye nezibalo ziyafumaneka kuwo onke amaphulo, fumana ukuba yeyiphi impembelelo ezisa eyona ROI, kwaye ungachithi uhlahlo lwabiwo-mali lwakho.
I-Bang enkulu kwi-Buck yakho -Intengiso ye-Influencer ayibizi kwaye iyinyani kuneendawo zemveli! Unokuqala kwi-Shoutcart nge-$ 10 nje!
Uphicotho lwemihla ngemihla -I-Shoutcart iphicothe abaphembeleli bethu mihla le ukuze ube nolwazi oluselubala malunga nokuba usebenza nabani na ukuze wandise iziphumo!
I-Shoutcart ibandakanya abaphembeleli abavela kwi-Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, kunye noFacebook.
Ulisungula Njani iPhulo lakho lokuQala le-Shoutcart
Akukho mfuneko yeefowuni zentengiso kunye neekhontrakthi, i-Shoutcart ngokusisiseko sivenkile ye-intanethi yokuthenga i-influencer shoutouts. Nantsi indlela yokuqalisa:
Fumana iimpembelelo zakho -Khangela kumawakawaka abaphembeleli kwi-Soutcart, emva koko ukhethe ezimbalwa ezihambelana ne-niche yakho okanye unikezelo. Unokukhetha ngokodidi, ubungakanani babaphulaphuli, idemografi yabalandeli okanye ngokulula ukukhangela ngegama elingundoqo.
ngeza kwitshathi -Emva kokukhetha abona baphembeleli babalaseleyo, bongeze kwinqwelo yakho kwaye uqalise ukwenza iodolo!
Yenza iodolo yakho -Gcwalisa ifom elula kwaye ulayishe umfanekiso / ividiyo ukuze abaphembeleli bayithumele. Bandakanya igama lakho lomsebenzisi okanye ikhonkco kwi-caption ye-odolo, ukuze ababukeli bazi indlela yokufikelela kunikezelo lwakho.
Ishedyuli kunye noHlawula -Khetha ixesha olithandayo lokukhwaza, kwaye uhlawule iodolo. Vumela ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-72 ukuze abaphembeleli bapapashe iodolo yakho kodwa ungakhathazeki, abaphembeleli abazukuthumela ngaphambi kwexesha olithandayo.
Fumana Utyhilelo Emva kokuba ukukhwaza kwakho kuhlawulwe kwaye kucwangcisiwe, uya kufumana isithuba kubaphembeleli obakhethileyo! Kulula ngolo hlobo!
Khangela iimpembelelo kwi-Shoutcart
Ukubhengezwa: Ndililungu le Shoutcart kunye nefuthe kwinethiwekhi yabo.
tags: thenga amaphulo entengiso yempembelelothenga ukukhwazathenga izithuba zemidiya yoluntuFacebookfacebook abanempembeleloamaphulo entengiso yempembeleloukuthengisa okunempembeleloiqonga lokuthengisa elinempembeleloinstagramIimpembelelo ze-instagraminqwelo yokukhwazaAbaphembeleli betiktokTwitteryoutubeiimpembelelo kwi-youtube
Aspire: I-Influencer Marketing Platform ye-High-Growth Shopify Brands